विहेको केही घण्टा अगाडी स्वेताको प्रश्न : के मलाई पुरुष प्रधान समाजले स्विकार गर्ला ? | Chitrawan Online
Home filmy विहेको केही घण्टा अगाडी स्वेताको प्रश्न : के मलाई पुरुष प्रधान समाजले स्विकार गर्ला ?
नायिक स्वेता खड्काले विहे हुनु केही घण्टा अघि फेसवुकमा लामो स्टाटस राख्दै आफ्नो भावना ब्यक्त गरेकी छिन । सोमवार विहेको तयारी हुदै गर्दा स्वेताले स्टाटसमा के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला र ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
स्वेताले लेखेको पुरा स्टाटस यस्तो छ :
‘अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न’ भनेझैं समयको दुश्चक्रले ममाथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडा केवल मलाई मात्र थाहा छ। म देख्थेँ, मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा, ठूलाठूला पत्थर अनि आगोको ज्वाला छरपस्ट भएर छरिएका छन्। मैले मेरो जीवनको बाटोमाथि छरपस्ट ती काँडाहरूलाई पन्छाउनु पर्नेछ। पत्थरहरूलाई फुटाउनु पर्नेछ। अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाघ्नु पर्नेछ। ‘के म यसो गर्न सकुँला र?’ आफैंसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैंले उत्तर दिन्थेँ, कि हुत्ती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’ अत: मैले मृत्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुध्दै क्रमश: अगाडि बढ्दै गएँ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९६ जनामा कोरोना पुष्टि : थप १७ को ज्यान गयो